Waa maxay Kumagai Tsuneko Hall Hall | Kumagai Tsuneko Hall Hall
Hall-ka Kumagai Tsuneko Memorial Hall waxaa la furay bishii Abriil 1893 waxaana furay Tsuneko Kumagai (1986-1990), oo ahaa qof firfircoon oo hogaamiye ka ahaa buugaagta kana ee haweenka xilligii Showa, ka dib markii ay dib u cusbooneysiisay gurigeeda ay ku nooleyd.Hoolka xusuusta, waxaad ka arki kartaa qormada qorraxda leh ee Tsuneko adigoo ilaalinaya jawiga gurigaaga oo la dhisay 1936.
Matxafku wuxuu leeyahay qiyaastii 170 shaqooyin ah oo uu qoray Tsuneko Kumagai.Waad ku raaxeysan kartaa adduunka buugga Tsuneko intaad la jaanqaadayso dulucda bandhigga.
Halkan guji si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee bandhigga
Xaaladda qolka bandhigga.Shaqooyinka qormooyinka qurxoon ee Tsuneko ayaa la soo bandhigayaa.
Waxa kale oo aad arki kartaa daraasadda uu Tsuneko dhab ahaan u adeegsaday.
Buugga Sanadka Gaaban ee Tsuneko Kumagai
Ku dhashay Kyoto.
Ku guursaday Koshiro Kumagai magaalada Kyoto waxayna u guurtay Tokyo.
Ka dib markay ka shaqeeyeen Kawakita Sakuramine (Showa 3) iyo Onoe Shibune (Showa 5), ​​waxay wax ku soo barteen Takakage Okayama.
Ka helay abaalmarinta Tonichi Daigo ee "Tosa Diary" oo lagu soo bandhigay Carwada Taito Shodoin.
Samee guri cusub (hadda Kumagai Tsuneko Memorial Hall oo ku taal Ota Ward).
Waxaa loo magacaabay agaasimaha machadka farshaxanka ee Calligraphy Japan.
Kenkokai waa la aasaasay.
Casharka 'Calligraphy' waxaa la siiyay Maamuuskeeda Princess Princess Michiko (oo hadda ah Boqortooyada Boqortooyada).
Noqo xubin sharafeed ka tirsan Ururka Mainichi Shodo.
Wuxuu noqday borofisar ka tirsan Jaamacadda Daito Bunka.
Helay Amarka Dhaxalka Qaaliga ah.
Waxaa loo caleemo saaray lataliyaha Nitten.
Wuxuu dhintay 9-kii Sebtember isaga oo jira 30.